Esikhathini ezweni of fashion konyaka izenzakalo ezihlukahlukene ezenzeka ngonyaka: ubuchwepheshe phelelisa ushintsho emisebenzini, kukhona ngaphambili imikhiqizo engaziwa. Budebuduze ngemuva ekuthuthukiseni kanye womshini imikhiqizo zezingane. Esikhathini 90 ezikude, bambalwa abantu bebazi ukuthi lo ahamba, izimoto ekuphathweni, unyakazisa izihlalo, onodoli ukukhuluma, amadolo pads izingane. Manje, imikhiqizo kwezingane eziningi kubalulekile sokuthuthukiswa ingane yakho.
Umsebenzi ngokuvamile kwenza ingane cabanga umama osemncane ukuze awuvikele uhlevane, nemivimbo imihuzuko. Ripoffs ngamadolo, ezigugile tights threadbare lapho ingane iqala ukuhlola umhlaba ngosizo nokudweba, musa njalo ukuletha umama nengane kumnandi. Abakhiqizi imikhiqizo zezingane baye banikeza indlela yokuphuma - amadolo pads izingane ukuthi ukukusiza ukuxazulula le nkinga. Bazokusiza:
ukuvikela ngamadolo kwengane ukulimala okuseceleni okubukhali kungenzeka;
ukugcina ubumsulwa panties kanye amasokisi amade;
kubanda ufudumale ngaphansi ingane outerwear;
e sezulu efudumele, lapho ehamba emgwaqweni akusho wagqoka tights esengeziwe noma ibhulukwe;
Luphinde-accessory nenhle ngomntwana, liyala kokubili abafana namantombazane.
Amadolo pads ukuvikela izingane ezincane kusukela phansi kanzima futhi abushelelezi ekuweni ezimbi futhi umonakalo kwalo. Ngeke zilimaze isikhumba obucayi ethambile ingane, ngeke ukulisindisa bezihlikihla, futhi agcine izingubo umntwana kusukela bezihlikihla. Falling enganeni encane lapho iqala ukuthatha izinyathelo zokuqala kuyoba kobuhlungu kakhulu futhi iphephile. Material kusuka amadolo pads zingase zihluke, zibalulekile ukuletha izicubu zemvelo ukuze singathwesi ngalesi siyingi kubangele ubuhlungu ukuze isikhumba ingane (ukotini, polypropylene, i-polyester, lycra). Amadolo pads asigcini nenkululeko isinyathelo, zingabantu ukhululekile kakhulu futhi akusho uthathe isikhumba.
Thenga amadolo pads izingane kungaba ezikhethekile ezitolo zezingane, izitolo inthanethi, kanye njalo umama omusha kungenza kwedolo ngezandla zakhe - thunga noma ukulingana, lapho kuyodingeka isikhathi esincane. Kulokhu, ungakhetha noma iyiphi impahla kanye izesekeli ukuze ivumelane ukunambitheka wakho, beveza i ijamo yasekuqaleni futhi udale "brand" yakho. Phakathi ezidunjini ezomisiwe "uphawu" izingubo izinsana, enziwe ngezandla zakhe, kuthandwa. Ngakho, uzodala induduzo ingane yakho, futhi ukunconywa phansi-nezintombi.
Amadolo pads enzelwe izingane ngesikhathi khasa amandla awo okwelapha. Bayoba anike ingane yakho ngokuzethemba futhi asethule amathuba amasha umsebenzi. ngokugcina Ngakho njengoba yayinjalo ngamadolo olubucayi. Amadolo pads izingane ingaba ithuluzi okuthembekile ukuvikela ukulimala izingubo. Phela, izingane ezincane, nazo zonke ngakho ngokushesha uzokhathala, kubalulekile ukuba uzame ukuyigcina eside ngangokunokwenzeka.
Kodwa khumbula ukuthi kungcono ukukhetha imikhiqizo efanelekayo endaweni yokuqala ingane yakho, kodwa futhi, onjengaye. Futhi, yena, ziyojabula nge imizwelo eyakhayo futhi ukuthuthukiswa ngokushesha futhi kungakabiphi iyoba Ukuziqhenya kwakho.
Ngiseyingane ukugcina ikholomu kokusuthisa?
Yini ngempela yezaga ezweni for the kids?
Lokudlala ephephile. Ukuhlanganisa for zokudlala
Kukhona tindilinga amnyama phambi kwamehlo akhe. Izizathu izingane
Injani tincture dandelion on vodka
Iqanda inyoni ye-pheasant: izakhiwo ewusizo nezithombe
Kungani acid folic kuyadingeka ngoba amadoda
"Blast kusukela lakudala" movie. Umlingisi Brendan Fraser Brendana Freyzera biography. "Blast kusukela lakudala": nabalingisi izindima
Manicure "Marsala": imibono design
Kris Kleyn: Biography futhi Filmography
Oka Iqanda: umenzi, isithombe, ukubuyekezwa
Uhlu umsoco ofanele kanye nokuqukethwe caloric imikhiqizo
Umahluko omkhulu amathuluzi ukwakhiwa, kuye ngokuthi umenzi